Inqaba Yokugcina: Ngaphansi komhlaba – Ukukopela&Hack – Amathiphu we-Android Cheats
Inqaba Yokugcina: Ngaphansi komhlaba – Ukukopela&Hack
Ngu umphathi | Novemba 25, 2021
Inqaba, the largest umphakathi of survivors, uwile.
Kwake kwaba isibani sethemba ku-post-apocalypse, manje isibhekene nesiphetho esifanayo nesabanye. Phakathi kwezinxushunxushu, iqembu elincane labasindile lakwazi ukubalekela ehlane eliwugwadule.
Ungumkhuzi walaba abasindile. Ngenkathi ubalekela ibutho le-zombie elicekele phansi indawo yakho yokugcina engcwele, uzithela phezu kwebhilidi eliyinqaba eliphuma phansi. Izimpahla eziphansi futhi zishiywe nezinketho ezincane, unquma ukukhosela kulesi sakhiwo. Ngakho uqala umkhankaso wakho wokusinda kulo mhlaba ogcwele ama-zombies.
【KWAKHA & YENZA NGENDLELA YOKUKHOKHELA NGENDLELA YAKHO】
Nweba indawo yakho yokukhosela ngezinsiza eziningi njengeSatellite Nexus, Amajeneretha Amandla, i-Mission Control, njll. Dala ukwakheka kwendawo yokukhosela nganoma iyiphi indlela othanda ngayo!
Wonke amaqhawe nabasindile banamakhono akhethekile okuphila abasize basinda ku-apocalypse. Kusuka kubapheki, odokotela, kanye nonjiniyela kososayensi, abavukuzi, kanye namasosha, kukuwe ukuthi usebenzise amakhono abo ngempumelelo!
【UKWAKHIWA KWEQEMBU NOKUHLANGANYELA】
Hlanganisa iqembu elihlukahlukene lamaqhawe, ngamunye unobuntu namakhono ahlukile. Yakha inhlanganisela yeqembu lakho olithandayo ukuze ikusize unqobe nezimo ezinzima kakhulu.
Hamba ngaphandle kwendawo yokukhosela futhi ufune izinsiza ezibalulekile ezindaweni ezingenalutho.
Misa amakamu ukuze asebenze njengezisekelo zokusebenza zangaphambili namaphoyinti ezinsiza. Kodwa qaphela! AmaZombi angahlasela noma nini!
【IZENZA UBUBAMBISANA NABANGANE】
Ukulwa wedwa kunzima, ngakho kungani ungalwi nabangane? Joyina noma dala i-Alliance futhi uqothule lawo ma-Zombies ayingozi nabalingani! Siza abalingani ngokusheshisa ukwakhiwa komunye nomunye nocwaningo lobuchwepheshe.
Kuyisimo sokunqoba noma kanjani! Konke noma akukho lutho manje! Phuma, Umkhuzi, futhi uqale uhambo lwakho!
Isigaba: Aphambe futhi Hack noma Amathiphu Amathegi: CheatsHack, Fortress, Ngaphansi komhlaba
← I-Oil Tycoon: I-Gas Idle Factory Cheats&Hack I-Merge County – Ukukopela&Hack →
Slash & Qengqa: Phila Guild Raids Cheats&Hack
Inselele ye-squid: Umdlalo Wokusinda – Ukukopela&Hack
Dungeon kanye Puzzles – Sokoban Cheats&Hack
Fantastic Beasts’ Inganekwane – Ukukopela&Hack
Siyi-Illuminati: Uzungu – Ukukopela&Hack
Udoti Pail Izingane : I-Game Cheats&Hack
Real Boxing 2 – Ukukopela&Hack
Inside Out Thought Bubbles – Ukukopela&Hack
I-Emoji Matching Puzzle-Brain Up – Ukukopela&Hack
Squid Imidlalo Ukusinda – Ukukopela&Hack